I-Smartling: Izinsizakalo Zokuhumusha, Ukusebenzisana, kanye Nenqubo Yokuzenzekelayo Yesoftware | Martech Zone
I-Smartling: Izinsizakalo Zokuhumusha, Ukubambisana, kanye ne-Software Automation Software
Uma ukuhweba kuqhutshwa ngamagama, ukuhweba komhlaba wonke kukhuthazwa ukuhumusha. Izinkinobho, izinqola zokuthenga, kanye nekhophi yothando. Amawebhusayithi, ama-imeyili, namafomu kufanele ahunyushelwe ezilimini ezahlukahlukene ukuze umkhiqizo ungene emhlabeni wonke futhi ufinyelele izethameli ezintsha.
Lokhu kuthatha amaqembu abantu aphethe ngokucophelela ishaneli ngalinye lokusabalalisa lokuqukethwe komthombo; futhi kubiza izindleko ukuthi amaqembu abhekane nolimi ngalunye olusekelwayo. Faka: I-Smartling, uhlelo lokuphathwa kokuhumusha nomhlinzeki wezinsizakalo zolimi onika amandla imikhiqizo ngamathuluzi okwenza okuqukethwe kube okwamadivayisi nezingxenyekazi. I-Smartling's Enterprise Translation Cloud, indlela eqhutshwa yidatha yokwenza okwasendaweni, ivumela amakhasimende ayo ukuthi azuze ukuhumusha kwekhwalithi ephezulu kakhulu ngemali ephansi ephelele.
ISmartling yipulatifomu yokuhumusha ekhethwayo kumakhulu emikhiqizo, kufaka phakathi iHootsuite, i-InterContinental Hotels Group, i-Sprout Social, i-GoPro, i-Shopify, i-NextDoor, i-Slack, ne-SurveyMonkey.
Yini eyenza ukuhlakanipha kuhluke?
Ukwenza okwasendaweni okuqhutshwa idatha - I-Smartling ayinikezi amakhasimende kuphela idatha yesikhathi sangempela mayelana nenqubo yabo yokuhumusha, kodwa futhi ihlakaniphe ngokwanele ukubathathela izinqumo.
Ukuzenzekelayo - Onjiniyela abatholakali kepha ukuhumusha kufanele kwenziwe. I-Smartling ixhuma ngaphandle komthungo kuma-CMS amaklayenti, amakhosombe ekhodi, namathuluzi wokumaketha okuzenzakalelayo ukunciphisa umthwalo wokwenziwa kwasendaweni.
Umongo wokubuka - Abahumushi kufanele babone amagama ngokomongo ukuze bahambise umsebenzi osezingeni eliphakeme. Ngaphandle kwayo, isipiliyoni somsebenzisi wokugcina siyahlupheka. Isixhumi esibonakalayo sokuhumusha sikaSmartling senza noma yimuphi umhumushi ukuthi aqonde iphrojekthi eseduze.
Ukuhumusha Komshini we-Smartling (MT)
Akuwona wonke umsebenzi odinga umhumushi ongumuntu. Uma kukhulunywa ngokuhumusha amagama esikalini, ukuhumusha ngomshini kuyindlela esheshayo nebiza kakhulu. I-Smartling ixhuma nezinjini ze-MT ezinamandla kakhulu nezanamuhla, kufaka phakathi i-Amazon Translate, i-Google Translate, i-Microsoft Translator, i-Watson Language Translator, nokuningi, ukusiza abasebenzisi ukuthola insiza eyi-MT efanele izidingo zabo ezithile. ISmartling ibuye isebenzise ukuhumusha komshini we-neural ukuvumelanisa ukuhunyushwa kokuqukethwe kuzwi elihlukile lomkhiqizo nezwi ngokuhamba kwesikhathi.
Izinsizakalo Zolimi lweSmartling
Izinsizakalo Zokuhumusha zeSmartling zihumusha amagama angaphezu kwezigidi ezingama-318 unyaka nonyaka kusuka ezibhangqwaneni zezilimi eziyi-150. Le nkampani isiza ukucwenga uhambo lwamakhasimende ngaphesheya kwama-vertical vertical angama-50. ISmartling isebenzisa inqubo eqinile yokuhlola, ngo-5% kuphela wabafakizicelo abakwenzayo, ukuqinisekisa ukuthi inkampani isebenzisa kuphela abahumushi abahamba phambili emhlabeni jikelele. Noma, uma unabahumushi bakho, ungabangeza kalula kupulatifomu ye-Smartling naku-flowflows yakho yokusebenza.
Ngokuthatha indlela ephelele yokonga izindleko, Izinsizakalo Zolimi zeSmartling zihamba ngaphezu kwamanani ancintisanayo ngegama ngalinye, zinikela ngezinhlelo zokuhumusha ezakhelwe ngokwezifiso ngaphandle kwezinciphisi zeprojekthi, kanye nohlu oluningi kakhulu lwezinketho zokuhumusha ezinganciphisa ukusetshenziswa kwemali yokuhumusha kuze kufike ku-50 %.
Ukuhumusha okusiza nge-Smartling Computer (CAT)
Inqubo yangempela yokuhumusha yenzeka khona ngaphakathi ku-Smartling, nethuluzi elakhelwe ngaphakathi le-Computer-Assisted Translation (CAT). Nge-CAT ka-Smartling, i-Visual Context ihlala inikezwa abahumushi, inika amandla abahumushi ukuthi baqonde kahle ukuthi yikuphi okuqukethwe abakuhumushayo, nokuthi amagama abo angena kanjani kulowo mongo. Lapho ukuhumusha uqobo kuqediwe, abahumushi basheshe bathuthele emsebenzini olandelayo ngenxa yomzila ozenzakalelayo.
ISmartling isebenza futhi ukwenza umsebenzi wabahumushi abangabantu ube lula ngangokunokwenzeka futhi, ngenxa yalokhu:
Umongo Wokubuka - Abahumushi bangabuka kuqala umsebenzi wabo bukhoma, nganoma iyiphi ifomethi
Imemori Yokuhumusha Yesikhathi Sangempela
Ukulawulwa Kwenguqulo - Okuqukethwe okusha okusanda kulayishwa kuvela ekuhumusheni, ngenkathi okuqukethwe okudala kuhunyushwa kusuka kwimemori kaSmartling
Amafa Brand - Izinsizakusebenza zemihlahlandlela yethoni nemikhiqizo
Ukuhlanganiswa Kwekhwalithi Ehlanganisiwe - Ukuhlolwa kwekhwalithi yesikhathi sangempela kusiza ukonga isikhathi sokuhlola amaphutha
Izinqamuleli zekhibhodi - Gcina isikhathi kuzo zonke izenzo
Hlanganisa izintambo - Hlanganisa izingxenye nge-keystroke eyodwa nje
Ukuphathwa Kwethegi Nezimo - Isebenzisa ukufunda komshini ukubeka amathegi ngokunembile
Umzila Ozenzakalelayo - I-Smartling igcina okuqukethwe kuhamba, futhi ihambisa ngokuzenzakalela ukuhumusha okuqediwe kusinyathelo esilandelayo
Ngokuhlanganisa ngqo nezinqubo namathuluzi akhona - ngokwesibonelo, ukulayisha okuqukethwe ku-CMS - I-Smartling inika amandla abasebenzisi ukwenza inqubo yonke ihambisane nokuhumusha uqobo. I-Smartling iyakwazi ukuhlanganiswa cishe nganoma iyiphi ipulatifomu noma ithuluzi umkhiqizo wakho osuvele ulisebenzisa
Umphathi we-Adobe Experience
Cloud Cloud yokuthengisa
Umholi ekuhumusheni amafu, uSmartling uthatha umsebenzi ngamunye ohlobene nenqubo yokuhumusha, ukuwahlanganisa abe idatha yamakhasimende asebenzayo ukusebenzisa izindlela ezintsha emabhizinisini abo. Ngenxa ye-Visual Context kanye nohlu oluqinile lwezici ezishintshayo, amakhasimende abona ukuhumusha okungabizi kakhulu kwekhwalithi ephezulu, ngesikhathi esincane.
Hambisa Umhlaba Ngamazwi
Kulo nyaka, uSmartling uqale umkhankaso omusha wokumaketha obizwa ngeMove the World with Words. Lokhu kuqale ngombono wokuthi kunabantu abangemuva kwakho konke okwenziwa yinkampani kumakhasimende: abahumushi. Ngakho-ke iqembu liqashe umthwebuli wezithombe othathe uhambo lomhlaba wonke ukuze abhale izimpilo nezindaba zabahumushi abayi-12 be-Smartling abahlala emhlabeni wonke. Lezi zindaba ziphila encwadini ethi Hambisa Umhlaba Ngamazwi etafula lekhofi iyatholakala manje.
Izinkampani ezifuna ukukhula nempumelelo yomhlaba ziyaqhubeka nokuthakasela ukunikela kwethu. Akukhona nje kuphela ukuthi amaphuzu amakhasimende ethu amasha okuziqhenya, kepha ukukhuphuka okuphawuleka kangaka kwe-NPS kusho ukuthi njengoba nje kukhombisa ukuthi amakhasimende ethu amanje anolwazi olungcono kakhulu lwe-Smartling. Kusitshela ukuthi siyazifeza izethembiso zethu kumakhasimende uma kuziwa ekunikezeni ulwazi oluhle kakhulu lwasendaweni ngobuchwepheshe bokuhumusha obusha kanye nabahumushi amakhasimende ethu abaziyo futhi abe yisandiso seqembu labo. Besingeke sibe khona ngaphandle kwakho.
Umsunguli we-Smartling kanye ne-CEO, uJack Welde
Hlela iDemo ye-Smartling
Tags: Umphathi we-Adobe Experiencegfpipulatifomu yokuqephuza yomhlabaukuhumusha komuntuibm watsonUmhumushi Wezilimiukuhumusha ngomshiniulimi oluhlukahlukeneisipiliyoni somkhiqizo womdabuulimi olukhulunywayoulimi lwemveloukuhumusha kwemvelosmartlingukuhumushaisixhumi sokuhumushaipulatifomu yokuhumushaabahumushi
Qondisa kabusha i-WordPress kuheda